सुध्रिँदै सुदूरको स्वास्थ्य | | Nepali Health
२०७३ वैशाख ५ गते ८:१४ मा प्रकाशित
बाजुरा – विकास पूर्वाधारमा सबैभन्दा पछाडि परेको सुदूरपश्चिमले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने फडको मारेको छ । नौ जिल्ला रहेको सुदूर पश्चिमका ५ वटा जिल्लाले स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गत महिना सार्वजनिक प्रगति नतिजामा मुलुकका ‘उत्कृष्ट १०’ भित्र अग्रस्थान प्राप्त गर्न सफल भएका छन् ।
नतिजाअनुसार स्वास्थ्य सुधारका हिसाबले अछाम देशभरिमै दोस्रो भएको छ । चौथो स्थानमा बैतडी, सातौंमा कञ्चनपुर, आठौंमा डोटी र नवौंमा बझाङ परेका छन् । यसअघि २०७०/७१ मा सुदूरका दुई जिल्ला अछाम र डडेल्धुरा मात्रै उत्कृष्ट १० भित्र परेका थिए ।
गरिबी सूचकांंकमा अन्तिम तथा मानव विकास सूचकांकमा ७४औं स्थानमा रहेको बाजुरा अघिल्लो वर्ष ०७०/०७१ मा ५२ औं स्थानमा थियो । पछिल्लो नजितामा भने बाजुरा १९औं स्थानमा उक्लिएको छ । अघिल्लो वर्ष १९औं स्थानमा रहेको सुदूरकै अर्को जिल्ला डोटी आठौं स्थानमा उक्लिएको हो ।
एक वर्षअघि ६९ औं स्थानमा रहेको अछाम भने छलाङ मार्दै मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा दोस्रो स्थानमा उक्लिएको छ । ‘थुप्रै कठिनाइ हुँदाहुँदै पनि प्राप्त नतिजाबाट मिहिनेत गरे धेरै सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने सिकाइ भएको छ,’ बाजुरा जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा. मोहन नाथले भने ।
सेवातर्फका २४ र व्यवस्थापन तर्फका ११ गरी ३५ वटा सूचकहरूको जिल्लागत प्रगति अंकका आधारमा मन्त्रालयले नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । सेवातर्फका २४ सूचकमध्ये खोप कार्यक्रम, पोषण सुधार, बाल विकास वृद्धि अनुगमन, सुरक्षित मातृत्व र परिवार नियोजन महत्त्वपूर्ण सूचक हुन् ।
सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लाले ०७१/७२ मा सेवा तर्फका यी मुख्य ५ सूचकको कुल पूर्णांक ३ सय २४ मध्ये २ सय ७१.९ अंक प्राप्त गरेको तथ्यांक विश्लेषणबाट देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष यिनै सूचकमा २ सय ६१.१३ अंक अर्थात् ८० प्रतिशत थियो ।
तथ्यांकअनुसार सुदूर पश्चिमले मुख्य ५ सूचकमा अघिल्लो वर्षभन्दा ११ प्रतिशत सुधार वृद्धि गरेको देखिन्छ । ‘सुदूरपश्चिमले स्वास्थ्य सुधारमा फडको मारेको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुगमन मूल्यांकन महाशाखाका तथ्यांक अधिकृत शिवलाल शर्माले भने ।
सुदूरमा चुनौतीपूर्ण रहेको सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रममा समेत उल्लेखनीय सुधार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम अन्तर्गत अघिल्लो वर्ष ९ जिल्लाको कुल ८१ अंक भारमा ५७ अंक प्राप्त गरेको थियो । यो वर्ष ६४ अंक ल्याएको छ ।
सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमअन्तर्गत ४ पटक गर्भ जाँच, संस्थागत प्रसूति र दक्ष स्वास्थ्यकर्मीद्वारा प्रसूतिको सूचक निर्धारण गरिएको छ । क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका तथ्यांक अधिकृत बन्दना श्रेष्ठले भनिन्, ‘सुदूरपश्चिमका जिल्ला अस्पतालहरूमा ०७१/०७२ मा ३३ गर्भवतीको सुत्केरीका क्रममा मृत्यु भएको देखिन्छ ।’ उनका अनुसार यो संख्या विगतभन्दा घटेको हो ।
डडेल्धुराबाहेक सुदूरका सबै जिल्लाको स्वास्थ्य अवस्था सुध्रिएको देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष छैटौं स्थानमा रहेको अछाम चार स्थानमाथि उक्लिएर दोस्रो स्थानमा आएको छ । १५औं स्थानमा रहेको बैतडी चौथो स्थान उक्लिएको छ ।
डोटी १९औं स्थानमा थियो, अहिले आठौं स्थानमा आएको छ । २२औं स्थानमा रहेको कञ्चनपुर सातौंमा पुगेको छ । २५औंमा रहेको बझाङले सेवा सुधार गरेर नवौं स्थान हासिल गरेको छ । २८ औंमा रहेको दार्चुला एक स्थान उक्लिएर २७औं बनेको छ ।
कैलाली ३६औं स्थानमा थियो, अहिले २४औं स्थानमा आएको छ । तर, अघिल्लो वर्ष आठौं स्थानमा रहेको डडेल्धुरा भने झरेर ३१औंमा पुगेको छ ।
आधारभूत कुरामा ध्यान पुर्‍याएर सेवा प्रवाह गर्न सकेकाले सुदूरका जिल्लाको स्वास्थ्य अवस्था सुधार हुन सकेको सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशक डा. सुशील प्याकुरेलले बताए । ‘औषधिको उपलब्धता र स्वास्थ्य कर्मचारीको प्रभावकारी परिचालनको परिणाम यो प्रगति प्राप्त भएको हो,’ निर्देशक प्याकुरेलले भने ।
नतिजामा प्रगति प्राप्त गरेकोमा सुदूरका जिल्लामा कार्यरत स्वास्थ्य क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरू हौसिएका छन् । स्वास्थ्य सेवामा चर्चा बटुल्दै आएका बैतडीमा कार्यरत डा. गुणराज अवस्थी सुदूरको स्वास्थ्य अवस्था सुधार भएकोमा खुसी छन् ।
‘कर्मचारीले जागिर पकाउने मनस्थितिबाट मुक्त हुने हो भने सफलता प्राप्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘सहकर्मीहरूको मिहिनेतले चार वर्षअघि ६८औं स्थानमा रहेको बैतडी अहिले चौथो स्थानमा पुग्यो ।’
कान्तिपुर दैनिकमा बाजुराबाट अर्जुन शाहले पठाएको समाचार